व्यायाम शारीरिक गतिविधि भएकाले त्यसले शरीरमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने बुझाइ छ। उदाहरणका लागि कसरत गरे तौल घट्छ, मधुमेह रोकथाम हुन्छ।
कोलेस्टेरोल र उच्च रक्तचाप नियन्त्रण हुन्छ। मांशपेसी र हाड बलियो हुन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ।
तर नियमित व्यायामको सकारात्मक मानसिक र भावनात्मक प्रभाव पनि हुन्छ। धेरै अल्पकालीन र दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक फाइदा पनि हुन्छन्।
१. खुशी अनुभव हुन्छ
शारीरिक गतिविधिले सेरोटोनिन, डोपामाइन र एन्डोर्फिनको मात्रा बढाउने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसले हाम्रो मुडमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। सकारात्मक भावना बढाउन सहयोग गर्छन्। नियमित व्यायाम गर्ने व्यक्तिले सकारात्मक भावनाको बढी भएको बताएका छन्।
२. चिन्ता र तनाव कम हुन्छ
शरीर तनावमा हुँदा वा अत्तालिँदा कोर्टिसोल उत्पादन हुन्छ। व्यायामले कोर्टिसोल घटाउने बताइन्छ। व्यायामले मांशपेसीलाई आराम दिन्छ र शरीरको तनाव कम गर्छ। त्यसैले नियमित व्यायामले चिन्ता र तनावका लक्षण व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्दछ।
३. निद्रा लाग्छ
नियमित शारीरिक गतिविधिले उठ्ने र ब्युँझिने स्वस्थ चक्र बनाउन सहयोग गर्दछ। सक्रिय भए उर्जावान अनुभव हुन्छ। दिनमा थकान घटाउन सहयोग हुन्छ। छिटो निद्रा लाग्छ र गहिरो निद्रा लाग्छ। यो हाम्रो शरीर र मन दुवैका लागि महत्वपूर्ण छ। अनिद्राबाट पीडितलाई शारीरिक गतिविधिले आराम पुग्ने विज्ञानले पनि पुष्टि गरेको छ।
४. स्वयंबारे राम्रो अनुभव हुन्छ
आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोणले स्वयंबारे हुने अनुभवमा ठूलो प्रभाव पार्दछ। फिटनेसलाई बानी बनाउनाले स्वयंमा बारम्बार लगानी गर्न सहयोग पुग्छ। यसले स्वयंको सम्मान र मुल्याङ्कन बढ्छ। जतिसुकै सानो वा थोरै किन नहोस् शारीरिक लक्ष्य पूरा गरे उपलब्धि र सक्षमताको बोध हुन्छ। सक्रिय हुनाले शारीरिक छविसँग सकारात्मक सम्बन्ध सिर्जना गर्न सहयोग हुन्छ।
सबै फाइदा चाहियो? नियमित व्यायाम गर्नुस्
माथि उल्लेख गरिएका सबै फाइदा लिन चाहनुहुन्छ भने नियमित र निरन्तरता आवश्यक छ। तर यो भन्नु सजिलो छ, गर्न गाह्रो। निरन्तरताका लागि जिम जान सक्नुहुन्छ। निश्चित समय लिएर व्यायाम गर्ने साथी पत्ता लगाउनु पनि अर्को उपाय हो। दैनिक जीवनममा शारीरिक सक्रियताको समय बनाउनुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण नगर्नुभन्दा थोरै भए पनि कसरत गर्नु राम्रो हो। त्यसैले दैनिक व्यायाम गर्न नसके कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक गतिविधिमा संलग्न हुनुहोस्। घर सफा गर्ने, कुकुरलाई हिँडाउने, हाइक जाने वा साथीसँग नाचे पनि फाइदा पुग्छ।
विस्तारै सुरू गर्नुहोस्, तर सुरू गर्नुहोस्। यसले शरीर मात्रै होइन मन पनि स्वस्थ हुन्छ।
Published Date: Sunday, 16th February 06:21:32 AM